Himalaya Dainik » कांग्रेसमा उठ्यो हिन्दुराज्यको माग : ६ सय नेताहरुले गरे हस्ताक्षर
कांग्रेसमा उठ्यो हिन्दुराज्यको माग : ६ सय नेताहरुले गरे हस्ताक्षर
शनिबारदेखि सुरु कांग्रेस महासमिति बैठकमा धर्मको मुद्दा जोडतोडकासाथ उठेको छ । आइतबारको बन्द सत्रमा बोल्ने धेरै सदस्यले संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’को विरोध गरे।
धर्मनिरपेक्षताप्रति महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको एउटा समूहले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाउँदै हिन्दुराज्य कायम गर्न माग राख्दै अाएको छ ।
बैठक स्थलबाहिर हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै महासमिति सदस्यकै हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ । हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व काठमाडौ महानगरमा मेयर उम्मेदवार रहेका नेता राजुराज जोशीले गरिरहेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा नवीन झाले लेखेका छन् ।
महासमितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रस्तावमा धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा समेटिनुपर्ने भनी बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच भनाभन भएको थियो । महतले शनिबारको बैठक उद्घाटन सत्रमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बोलेका थिए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पार्टीभित्र देखिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू पनि रहेको बताए । पौडेलले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको बताए ।
महामन्त्री कोइरालाले महासमिति सदस्यले धर्म विषयमा जे राय दिए पनि आफू धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अडिग भएर उभिने बताए । कोइरालाले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता संशोधन गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सबै विषयमा महासमिति सदस्यले खुला विचार राखेको र अन्तिम छिनोफानो अन्त्यमा हुने बताए । बन्दसत्रमा चितवनका दिनेश कोइरालासहितका सहभागीले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
कोरोना भाइरसबाट ‘ज्यान गुमाउने’ पहिलो नेपाली २९ वर्षीया सावित्री
कोरोनाबाट नेपालमा २९ वर्षिया महिलाको मृत्यु
एउटा अद्भुत ग्रह जहाँ आगो ‘दन्किरहन्छ’ र फलामको वर्षा हुन्छ
क्रिकेटका ८ महिला एङ्करः जसका अघि ‘फिका’ लाग्छन् बलिउड नायिका (तस्बिरसहित)
महिलाले याै’नसम्प’र्क किन गर्छन् ? केहि आ’श्चर्यजनक कारण !
थप दुई जनामा कोरोना पुष्टि
प्रियंका चोपडाको लकडाउन डान्स: झण्डै ६० लाखले हेरे (भिडियोसहित)